Oko kuzisa i-AutoCAD 2009 - Geofumadas
NgoFebruwari, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Kungekudala sathetha ngo uphuculo lwe-AutoCAD 2008 kwaye i-AutoDesk sele ikhuphe ezinye zezinto eziphuculweyo ukuba i-2009 version eyaziwa ngokuba yi-AutoCAD Raptor iya kuba ... nangona emva kokukwazi yayo imbali kwi-25 iminyaka Siyazi ukuba lo awulona unyaka weenguqu ezingaphaya kokuzenzela.
1. Ngokubhekiselele kuMsebenzi kunye nezinye iinkqubo
I-AutoCAD 2009 iqinisekisa ukuba iqinisekiswe ukuba isebenze neWindows Vista (oko kukuthi, ibhokisi ine logo ehambelana ne ...)
Yaye ngubani oqinisekisileyo kwiWindows Vista ukuba asebenze kakuhle rhoqo? ... kwaye ngokuqinisekileyo saqala ukuphelelwa lithemba malunga noluphi uhlobo olulindele ukuba iqela libe nalo, ukuba unqakraza iWindows Vista ngaphandle kweqakrazo yombili iphukile. Isebenza kuphela kwi-Windows XP yaseKhaya yoHlelo kwaye kuqhubeke.
Awukwazi ukufunda ifayile DGN, ngenisa nje, hayi ukuphucuka kakhulu phezu AutoCAD 2008, kuphela umaleko ulawulo ipropati lula ngakumbi kwimeko leefayile zivela DGN ... ah, kwaye ingaba V7 okanye V8. Siza kubona ukuba olunye usuku lwenza ntoni ukhuphiswano lwayo (iMicrostation), eyamkela ifomathi yayo ye-dwg njengowokuzalwa.
2. Utshintsho kwi-interface.
I-interface ngoku okulapho Ofisi 2007, isicwangciso ethandabuzekayo kwabanye kodwa iinqobo ze ezimqoka iza sibe luncedo xa uzama ukugcina bume ukufana ukusetyenziswa ethandwayo ... logama nje musa ukuthabatheka lutshintsho lukhulu kule interface benzisi
Nangona yinto yokwenza kuphela, kukho izinto ezintle kulo:
Iibharki zeetrabha ezijonge kwiRibhoni
Le ngenye yeenguqu ezintle, ngokuba umbutho weemithetho udlula kwiibhaso ezingapheli ukuya kwipaneli edibeneyo egcina izithonjana kwaye ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso. Ngokuqinisekileyo kuya kusinceda ekuqaleni ekuqaleni esele sinayo indlela yokuqoqa imiyalelo esetyenziswayo.
Ngoku ke panel tyaba, usoloko abahamba imiyalelo indalo (ukuzoba), hlela (ukulungisa), boundedness (dimmensions) ... kodwa ngoku kuza zoleko (maleko) kunye nabo iiphaneli ukuba babebizwa kuphela xa kuyimfuneko kodwa eziphembelela ekulahlekelweni kwexesha njengoko umntu evula abadwebi bhodi yokudweba rhoqo ngexesha loqulunqo luhlala. Kwakhona ngoku, njengase-Ofisi, zibeka phambili kwiindlela zokusetyenziswa ngendlela ejikelezayo.
Ixabiso lale liyabonwa ngabasebenzisi be-Microstation, abathanda loo ngcamango yokungabikho ukuvula iipaneli zokupaka okanye ukukhethwa kwezi efini ... ukunika umzekelo.
Olunye utshintsho kwiqhagamshelo lubandakanya «isiqulathi se menu«, Ebonisa ifestile esecaleni ekwazi ukukhangela iifayile, imiyalelo kunye nezinye izibonelelo ... sizakubona ukuba iluncedo kakhulu.
Ibha yamathuluzi okufikelela ngokukhawuleza, kunye nento abayenzayo ukufumana apho ukubeka khona imiyalelo jikelele (entsha, gcina, phrinta, ikopi, unamathisele ...)
Umtshutshisi, mmm, mmm, uncedo kuphela, kunye nenjini yokukhangela edibeneyo kunye nokwenzeka kokubeka amabhukumaka nangona kubasebenzisi abancinci be-Autocad basebenzise uncedo kuba aluzange kube mnandi.
Ibar yomgcaOko kukuthi ezo iilebhile ortho, igridi, osnap, LWT ngoku colcan kwi bar ephantsi ukuze ucingo ngaphantsi ... 'umdla into yokuba kukho abathile ukufikelela ebalulekileyo parameters usebenzisa iindlela, iiyunithi kunye nezinto ngaphambili kuphela owenziwe ukusuka kumgca womyalelo.
3. Iinguqu kumsebenzi wokulawula
I-AutoCAD i-2009 ifuna ukucombulula ingxaki yomculi etafileni yakhe, apho ukubeka khona amathuluzi amaninzi kwaye ngendlela ethile iphumelele izinto ezithile ezibalulekileyo, phakathi kwazo:
Ibha yepropati iya kwiZakhiwo ezikhawulezayo
Kwakusoloko kunomsebenzi kodwa kunomsindo kwisithuba esikhankanywe kuyo, ngoku xa uhambisa isikhombisi phezu kwezinto okanye usebenzise umyalelo kusebenze. Ngethemba kwaye kungekhona ukuphazamisa okwenza silahlekelwe imemori yokusebenza, igalelo libukeka luhle; Siza kubona ukuba unokuyiphumelela imfazwe kwimimiselo yenkomfa yakho.
Ezinye izinto ziba "ziKhawuleze"
Ukutshintsha phakathi kwendawo yokusebenzela kunye nemibono (imibono kunye neendlela) ngoku kuza nezinye iindlela zokubavakalisa kwisitayela esihle somthandazo ebusuku (iilebula ezantsi okanye kwimenyu ephezulu). Kuyafana ukuzisebenzisela okokuba bayifake kwibhodibhodi nge-ctrl + ithebhu, kwiqhosha lasekunene lemouse okanye kwezinye iifayile kwibha yomumo.
Nokuba "umbono obhalwe ngegama" unokuba neepropathi zokuhambisa (ezintathu kuphela) kunye notshintsho lwesimbo sePowerPoint (umboniso / isitshixo sokujonga).
Khangela ukugcina iinkqubo eziphindaphindiweyo
Oku kuxabise i-AutoCAD kakhulu, kuba imiyalelo ilungelelaniswe kakhulu kwaye incinci ivele ngezinto ezinje: umyalelwano, faka, umgama wokuphuma, ungene, umkhombandlela wecala, ukuphela komyalelo ... ukuba ufuna ukwenza amanyathelo e-5 kwakhona . Oku kusetyenzwa kubi kusenze ukuba sibe ziingcaphephe zekhibhodi, isandla sasekunene esinegundwane kunye lasekhohlo lokukhetha oonobumba okanye isitshixo esingenakubaleka se- “esc”.
Kule meko, i-AutoCAD 2009 ibheka into ebizwayo «Isishicileli sezinto ezenziwayo», Ngokufana nokugcina ii-macros, kunokwenzeka ukuba zisenze ukuba siyilibale i-keyboard kunye nemiyalelo yokubhaliweyo ... ngokunyaniseka ndicinga ukuba kuya kubiza imali eninzi kuba siyayiqhela kwaye siyayithanda. Ndingabheja kwi-AutoCAD ndikhangela uluvo "lomyalelo uhlala usebenza" kunye nemenyu yokujonga imeko, kuphela emva koko sinokulibala ikhibhodi.
Nangona kunjalo, ndiyaqonda ukuba olu tshintsho luya kuba luncedo kwizizukulwana ezitsha, kwaye kuzo zonke izinto ezibizwa ngokuba ngumsebenzi «Isixhobo» ukuba ubeka imouse emgceni ikuxelela «uthe isalathisi sakho phezu into ekuthiwa uncedo intanethi uyakwazi ukuchaza ukuba ukwenza njani umgca, nayo kwi-Internet bafumane indlela yokwenza umgca, kwaye musa ukulibala jonga kwi blog 25,456 iindlela zethu ukuba wenze umgca«... iluncedo? mhlawumbi kodwa andicingi ukuba kuya kuhlala ixesha elide ngaphandle kokuba banika ukusebenza okungcono.
4. Ukuphucula imiyalelo ... bambalwa
Umxholo. Ngoku unokwenza upela ukuhlola xa ubhala, siyaqonda ukuba iSpanish ifakiwe.
Khangela uphinde ubeke endaweni. Ngoku uphando luvelisa uluhlu olungenza iindlela ezichanekileyo kwaye lutshintshe ... kungekhona nje itekisi.
Ukukhanyisa kunye ne-3D. Nangona bongeza inzuzo encinane kwi-VSLIGHTINGQUALITY, incinci ifunyenwe yiyo, kuba i-3D imodeli abantu abaninzi basebenzisa ezinye izicelo ze-AutoDesk ... nangona kukho ezinye benza izinto ezimangalisayo. Ba phumeza ViewCube, ukulawulwa kokulawulwa kwezinto ngobunzima obuthathu, kubonakala kunceda ukwenza imisebenzi ethile ebalulekileyo okanye ubuncinane kuququzelela ukhetho kunye I-SteeringWheels ikuvumela ukuba uqhube kwi-3D okanye wenze ukulandelelana.
Georeference. Eyona nto ifanelekileyo ukuba le nguqulo izisa, nangona asivuyo kakhulu; akukona ukulawulwa kwenkcazelo, oku kwenziwa nge-AutoCAD Map3D, kodwa ubuncinane i-AutoCAD 2009 yongeze ukhetho lokusingatha i-coordinates / longitude coordinates kunye nethuba lokudala umyinge welo ndawo. Nangona awukwazi ukudala igridi kokubili UTM njengoko kuhambelana neendawo.
Ngaphezulu, akukho nto ikhoyo ngoku, yintoni UHeidi waphendula, Intokazi ikhangeleka engaphangeliyo elungileyo kodwa anika iinkomfa ezinkulu iziganeko zonyaka ... kunye ngakumbi strafed ukuqonda kokufika ... IsiNgesi kunye isafobe ukuba kusishiya emangalisiwe njengoko kwaba njalo xa wathabatha seCawa wokuqala AutoCAD e 1986 .
Silindele ukuphuculwa kokuhlanganiswa neGoogle Earth, Kulindeleke ukuba kulo lonke unyaka siza kuqhubeka nokubala ngaphezulu, ngokuqhelekileyo ngenyanga ka-Apreli AutoDesk ivula iimveliso zayo. Okwangoku i-AutoCAD 2009 Raptor yinguqulo ye-beta, kwaye inokukhutshwa xa ubhaliswe njengomhloli we-beta.
Unokubukela ividiyo yezinye iziphuculo kwiblogi ye UDonnie Gladfelter
Ungabona kwakhona izibuyekezo zomsebenzisi kwi-Todo Arquitectura malunga nendlela eya kuba yi-AutoCAD 2009
AutoDesk Blog Dgn Dwg Umhlaba ka-Google
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Geofumed kwi-fly, ngoFebhuwari 2007
Post Next Ngubani odibanisa neeGofumadasOkulandelayo "
Iimpendulo ze-52 "Yiyiphi i-AutoCAD 2009 efanelekileyo"
Uya kundibuza kwakhona ikhowudi yokuqalisa emva kokuyifaka kanye ngempumelelo ...
UJulio Arroba uthi:
Umntu ndincede ndimmisile AutoCAD 2009 kwaye ahroa kum reorders ikhodi kusebenze usebenzisa keygen kwakhona kwaye ivelisa ikhowudi esitsha introdusco kodwa alishiye activ ngempumelelo kodwa xa uvula AutoCAD mna reorders vuliwe umntu unako ndinike uncede kule ngxaki ... mbulela
I-Autocad 2009 ilungele abantu abaziyo ukuwusebenzisa kwaye i-capaitados ye-usu yale nto
Ndicinga ukuba yinto ...
Kulula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa i-autocad 2004 okanye i-2006, basebenzisa ubuncwane obuncinci kwaye bakhawuleza kwaye badala ngakumbi; Isinxibelelanisi somsebenzisi silula kwaye siqonde ngakumbi. Into eyiyo i-2009 eyenzayo kukuxuba zonke izixhobo, ukutshintsha yonke into, ukudibanisa i-interface kwaye ube yintloko yethu kuthi thina singcaphephe kwi-2006 inguqulelo, kuba ukufezekisa iziphumo ezifanayo kufuneka sichithe iiyure ukuphanda « apho babefuna ukubeka khona isixhobo esinye kunye negama elitsha ababeza nalo.
I-Autocad 2006 ingakumbi ngokuthe ngqo kwaye iyasebenza.
Njengokuba ndiyazi, awukwazi, ukuba ngaba bafuna ukuphicothwa ngokusemthethweni, banokukucela isatifikethi sobuqiniso obuza kwibhokisi, apho inombolo yecala yomkhiqizo.
Ndiyaqonda ukuba ngoncedo / malunga ne-serial kufuneka ibonakale, ukuba uyifumana kwaye ubiza umnxeba wakho wase-AutoDesk wendawo unokukufumanisa ulwazi ukuba kusemthethweni kwaye kwigama lakhe lifunyenwe.
ukuva oogxa bangathanda ukwazi ukuba ndiyakwazi njani ukuba i-autocad q ifakwe kwi khomputha sele ixelelwe q q pite yayingumntu wokuqala kwaye ingabali i disk okanye ibhodi yomsebenzisi nayiphi na icala kwaye i-ay kuphela yidiski i-pirate autocad kwidesktofa ye porfa ukuba umntu uyayazi kwaye unokundixelela ... thumela i-meil kwi-imeyile yam berna.cr@hotmail.com
Ndiyathetha ukuba nangona umntu ebenalo, i-installer ingakwazi ukulinganisa ngaphezu kwe-900 MB, akukho i-imeyile eye yamkela ifayile yolu hlobo njengesiqhotyoshelweyo okanye umntu ozama ukukwenza.
Ndinengxaki encinci ... andikwazanga ukukhuphela nayiphi na i-autocad yalo naluphi na uhlobo kwaye ndiyifuna ngokungxamisekileyo ... ukuba ubani unayo nceda udlulise kum i-imeyile yam anairam_923@hotail.com I gracias
Ukuba oko ufunayo kukuba imenyu yakho inesiNgesi, akunakwenzeka, kufuneka ufake ifayile yesiNgesi. Ezinye iprogram ekhululekile ezifana ne-gvSIG ivumela loo nto, kodwa i-AutoCAD ayikho.
Ukuba ufuna ukusebenzisa imiyalelo yakho ngesiNgesi, kufuneka udibanise umzekelo, umzekelo:
NgeSpanish kuya kufuneka ubhale umgca wokuyalela
kwaye ukuba ubhala umgca awuyamkeli kuba yinguqulelo yeSpanish
ke ubhala u-_line
Molo, inkxalabo yam yile ilandelayo ndine-autocad 2009 eSpanish efakiwe. Ndiyazibuza ukuba ingaba ukhona umthetho oya kusiguqulela kwisiNgesi nje ukuba unombulelo ...
Andikwazi ukulanda autocad2009.-
le khowudi kuku-autocad 2008, ndiya kukubulela.
Ukuba umntu angenza le khowudi, ndiya kukubulela, kufuneka ibe kwinkqubo yokusebenza ye-64 bits. mbulela
ukuba ngaba enye ye-32 ayisebenzi kumntu ophosa.
YCNK Q7RE I-TEP7 DU53 INQAKU YOKUQALA
kwaye ndifake iifestile vista ekugqibeleni x64
molo, ndinayo i-autocad 2009 efakwe kwinkqubo ye-64 bit, iyacotha, kwaye ukuba ndine-4gb, isiseko se-phenon quad, kunye nebhodi ye-9800 gtx + geforce, isikhombisi sitshixa yonke into xa ihamba ngemigca kunye / okanye ubukhulu , yiya nayiphi na into, yinto esezantsi ukusebenza ngolu hlobo. Kwafuneka ndiyifake kuba andikwazi ukufumana isitshixo se-2008 64 bitgen keygen endinayo kwinkqubo yam yokusebenza. Ukuba kukho umntu onayo nceda undithumelele i-imeyile yam ukususela ngoku ndiza kubulela. flacolava@hotmail.com
Nantsi enye , abanye ungabathola kwiArquitectuba
martha puello uthi:
nceda ngubani ophethe iincwadi ze-car cad 2007 kunye ne-2009 ukuba ungathumela kwi-imeyile yam Ndiyayixabisa yakho ingqalelo i-imeyile martha.puellovega@gmail.com.
Andiyithandi kwaphela imenyu njengoko imodareyithwe kwi3d kwi2009 le nto izama ukuxelisa sketchup kwaye sele ndenza ubumdaka bokuba yimodeli elula xa sele ndilahla ityhubhu le nkqubo izama ukusebenza ngobuso ngaphambi kokuba ibengcono kwaye inciphise kwaye baya kuba nako ukubukeka njenge-sktchup le yi-mierdaaaaaaaaa.
Umbuzo wam ungayifaka njani umsebenzisi wenguqu yangaphambili?
umntu unokundinceda ...
kuba abapheki, kuya kuba bhetele kwaye babeya kuvuya ngakumbi.
UDani Pérez uthi:
Sebenzisa AutoCAD ukusuka kuguqulelo 12 baphakamise imithamo 3D, amava kundixelela ukuba iinguqulelo odd aba Kaka oku obusekela uguqulelo 2009 ukuphucuka kuphela ukuba izisa ezi ofisi uhlobo kwiimenyu ongazange naswela nto ukususela AutoCAD wena kunye ikhibhodi yaye akukho icon okanye toolbar kwikhusi (njengaye nawuphi na self-ngokuphathelele abaqeqeshiweyo). Ndiya kususa i-2009 kwaye ulinde inguqulo ye-10. Hi ndlela leyi ndzi ni Maquinon kunye 8 32 xeon kunye Gb of yemvu, ngenxa infographics.
FRANCISCO GREMO ARNAUDO uthi:
Yinkqubo endiyisebenzisa ukusuka kwi14 ukuya kwi2008 eneziphumo ezihle kakhulu enkosi
Messrs. Nangona abaninzi bathi olungileyo nasekuqaleni okubi aze abuze ukuba indlela tabs, ndicinga ngayo ngelo ukuthetha malunga Umzekelo ngakumbi, ndiye isebenzisa AutoCAD ixesha elide, ukusuka R13, kude 2009, mna Xeon of 3.0 Gb, 3 GB of RAM computer kwaye mitico Win XP ... namhlanje zama ukulayisha ifayile ngesimo sendawo 12 sheets waluvala phezu kwam lonke ixesha e 8 lamina, iifestile ewalayishayo zibe cache kwaye ngokwenene kukufumanisa yadika program, okuninzi ilibele, ngokungafaniyo 2006 nam ifakiwe kwaye iimpukane, andifumananga indlela amaphepha kuzo layisha ukusuka RAM, kodwa ngokwenene okubi, liyigqibele ezininzi kwezibonelelo ezingasisebenzisiyo ... yam uluvo lobuqu ukuba banako ukufaka, kungekhona ukwenza kunye nokusebenza iinguqulelo ezidlulileyo yale nto ukusebenza ngcono ...
archeio suarez uthi:
Imibuliso awukwazi ukwenza amazwana angalunganga malunga ne-AutoCAD 2009 ukuba awuzange uphathe imihla ngemihla iinkqubo zingcono
!! I-AutoCAD i-R12 ?, Le nguqulo i-DOS?
Ndicinga ukuba i-autocad i-12 ibhetele, ndisayisebenzisa
Ndicinga ukuba ezinye iindlela ezinokuthi zizithenge i-AutoCAD kwixabiso kwaye azifuni ukuba yi-pirate zizo zomgca IntelliCAD, basebenza ngokufanayo ne-AutoCAD kodwa baxabisa i-$ 300.
Ukuba inkampani okanye uchwepheshe uhlawula i-$ 700 kwikhompyutheni, kufuneka ukwazi ukuthenga enye yale mvume ngaphandle kokukhangela.
Oko uthethayo kuyinyaniso, yimihla yokuvavanya ye-30 kwaye kufuneka uyithenge, ingxaki kukuba ezi nkqubo zibiza kakhulu. Kuze kube manje i-250 MB ye-RAM isekela iWindowsowa Vista, kodwa ndicinga ngokunyusa ukwandisa lo mandla ubuncinane kwi-350 MB. Ndiyabulela idatha!
Iiprogram ezinemihla yokukhawulelana ye-30 kukuba zifuneka zithengwe ngaloo mhla. Akhe akhululekile.
Ngaphandle kwesazi, 250 MB ye RAM kunye neWindows Vista inkxaso?
Sawubona! Kutsha nje wafumana laptop Toshiba 4 250 Gb RAM kwaye iza Vista Ekhaya Premium Windows, ikuvumela mna lula ukufaka i AutoCAD 2008 kunye / okanye 2009, kodwa ndandingakwazi isebenze naziphi na iinkqubo ezimbini (kusoloko ukufumana isiphoso !!! ) kwaye umntu wathi ngentla, yakha kwixesha elisikiweyo (iintsuku 30) ukuba isebenze nayiphi na inkqubo okanye ngenye indlela uvalelwe (ukuthintela oku bekungayi kuba kuhle ukuba khipha inkqubo phambi kwexesha elibekiweyo, wandule akasivumeli ukwenza). UMBUZO: I isebenze njani nokuba ezi iinguqulelo ezimbini AutoCAD (ingakumbi 2008) kule khompyutha ????
Hayi, akukho patch yale. Ukuze ube nayo ngeSpanish, ingxelo yeSpanish kufuneka ifakwe.
Ndixolise ndifuna ukwazi ukuba kukho iqhosha lokuya kwisiNgesi ukuya kwisiSpanish nge-autocad 2009, kuba ndiyifake ngesiNgesi; kodwa kunzima kum
Kwiimifanekiso ezibonisa imvelaphi yendawo yokudweba imhlophe apho i-istale igundwe kwaye andithandi ndiyakushintsha umbala ongasemva?
Andrea Varon uthi:
Molweni nonke, ndikhe ndayiqamba ixesha elide kwaye ndisebenzise i-autocad iminyaka engaphezu kwe-8, ndiphethe ngesandla phantse zonke iinguqulelo ukusuka kwi-R13 kude kube ngoku eyona ilungileyo kum yi-2008. Ndikucebisa ukuba uzame i-SketchUp kulula kakhulu ukuphatha kwaye kukho izibonelelo ezininzi kwi-intanethi yokufunda kwakho. I-2D, i-3D, Imodeli yomhlaba (awunakuyicingela yonke into enokwenziwa), kubuNjineli bobuNtu, uyilo, uyilo lwegraphic, uyilo lwemizi-mveliso, uyilo lobuchwephesha, infographics, njl. Ngokwam ndicinga ukuba yeyona nkqubo ilungileyo bayenzileyo. Inee plugins zokuvelisa iingxelo zeendleko kunye nenani lomsebenzi. Ndiyayicebisa.
Fumana ummeleli wakho we-AutoDesk eColombia, ngokuqhelekileyo kukho izifundo zabafundi ngeendleko eziphantsi kwaye kukho nokuba nokubhalwa kwee-scholarships
Ndingayifumana njani i-autocad 2009 kwaye ndithathe iikhosi ezifanayo?
INGA marcelo. uthi:
I-2008 INKULU, ANGIFUNI UKUCACISA I2009
Eneneni, ndathabatha 2004 2005 OKANYE, usamkhathazelani 2008 akakabi A IZIXHOBO HAND PHAMBI INKQUBO KUBONAKALA ABANZAR bawayo ngasemva.
Ing.JOSE CORREA uthi:
I-autocad 2009 yinto enhle kwaye isebenzisekile ukuyisebenzisa ngenxa yokuba isisindisa ixesha elide kuba lizo zonke izixhobo ezilula ukuzisebenzisa kwiibhodi ezithe ngqo. Kodwa ngaba ngaphi i-gb kufuneka ndifumaneke kwikhompyutheni ukuze ndikwazi ukuyisebenzisa ngokukhawuleza, kuba ixhomekeke xa ndiyisebenzisa ...
I-autocad 2009 intle kakhulu ibuhlungu kukuba kufuneka ubenenkumbulo edlula leyo ye-gb kuba itshixa kwaye, iyandiphula into yokuba ungayisebenzisa kwaphela inyanga
kuba undibuza ukuba i-codogo ye-activation kwaye andifumananga naliphi na indawo! Ukuba unokunceda, ndiyakuyixabisa.
Ndicinga ukuba le Cad intsha yinkcitha-xesha yaye imali kokuzifaka kwiimfuno ezininzi kakhulu kwi khowudi kunye nezinye izinto, kungekudala ngoko 2008 ingcono yaye inyaniso iya kubona akukho mahluko ekusetyenzisweni kwezi nkqubo
pedro herrera uthi:
Ingxelo engcono kakhulu endiyifunayo malunga ne-autocad 2009, eyona nto igqibeleleyo kunye nenjongo, NOKUTHANDA
Bonke abo bakhala malunga nendlela esebenza ngayo i-2009 autocad zizinto nje ezimbini, enye engazi kwanto malunga neekhompyuter kwaye engazi ukuba ungayilungisa njani imeko ye-autocad, ukuba ngaba ngu-****** kanye njengabaqulunqi beenkqubo bazibeka iithebhu. »Ukuba uyasivumela ukuba sizisuse, ukuba awuyithandi ii-toolbars ezintsha ungenisa imbonakalo kwenye i-autocad yangaphambili okanye oyithandayo okanye nje uyiguqule. Ngoku ukuba isebenzisa izibonelelo ezininzi kuyinto eqhelekileyo kuba ukuthengisa izixhobo ezintsha kuthengiso olunyulu, kodwa kwakhona ungasisebenzisi ngepentium ye-3 kunye nenqama ye-256, kwaye uyazi ukuba yindawo ebonisa imemori yevidiyo enikezelweyo ye48 -64 megabytes ayanele ukuba ndine-p4 3.0 ine2g kwinkunzi yegusha kunye nvidia8600 ye512 kwaye ndinomatshini omninzi wokusebenzisa i2009. Sukuthetha ngemveliso ukuba awuyazi into emayibe ngasemva.
Ukuba inguqulelo yakho isebenza kuwe, ungayitshintshi nangona ingenakuguquka, i-Autodesk ayiyi kutshintsha iimbono zethu
Ukuba uya kutshintsha kwi-2009, qiniseka ukuba unememori eyaneleyo yegusha, funda ukwenza oko ungayithatha iiyure ezimbalwa ngaphezulu
Ndine-AutoCad 2008, ndincoma ukuba ndibeke i-2009, kuba kuzo zonke iimbono ezingentla, ndicinga ukuba zibi kakhulu, zingcono zihambe 2008 .. ??
Manuel Matamoros uthi:
Ndibe ngumsebenzisi we-autocad 2009 ixesha elide; le nkqubo iye yinto enhle ngokwenene, nangona kule nguqulelo, ndiyayeka ukuyisebenzisa, yinto engumntu oyisidenge. Andikholelwa ukuba benza inguqu enjalo. Kuyamangalisa ukuba zininzi izixhobo azisebenzisayo ukubandakanya i-TABS ezingenangqondo ezingasebenzelanga nto. Mbi, kubi kakhulu ndiza kuthetha, kuba ukuba abazange bathengise ngokusemthethweni, ngoku baya kwenza okuncinci, kuba abasebenzisi abaninzi, okanye ngeendlela eziphambeneyo, baya kuyithenga.
AutoCAD 2009 nomas damn, ndiye instaldo ukuba CD na imibane 2008 kum, ngaphandle kuphela into elungileyo aba mama of toolbars IRibhoni njengoko mngqibi ivale mna lonke ixesha, kwaye ndenze intsalela iimpazamo
umbane xa umntu enendlela yokuyilungisa okanye undigqithise inqaku lokukhuphela i-2008 kwakhona
Uya eofisini kwaye uyinike yona ... hehe
okanye uyithumela ngeposi
Ndingayidlulisela njani imephu komnye umntu
marlon castle uthi:
Hey khangela I sele unayo i 2009 AutoCAD kodwa ingxaki sele ifakiwe endibuza ukuba i ikhodi kusebenze kodwa abe iinkcukacha ukuba xa ndiye crak for'ponerle nesiziba ithumela kakubi kwaye musa geenera nantoni na elungileyo keygen ngethemba Hechen isandla phandle phaya
Mauricio Gómez uthi:
I-Autocad 2009 idla i-5 okanye ii-6 ngamaxesha ngaphezulu kwezixhobo kunokuba i-2008, kwaye ineengxaki ezininzi ngeentsimbi. Ihlala ivala kwaye idala iimpazamo, ikhumbuze inguqulo ye-2000
rogelio antonio r uthi:
ps ukuba q yinto entle kodwa kwimeko auto Cad imephu 2009, nto leyo eya kuba uphuculo ziya kuza ngenye imini kuvelisa kuquka cudriculas esekelwe cordenadas yakho ArcView bha ngokufaka tif imifanekiso gif ecw kunye ujongano ezintsha ukudala iifayile ezahlukeneyo